Vaky ny Fitsarana : Very ny « grand dossier » an-dRavalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaVaky ny Fitsarana : Very ny « grand dossier » an-dRavalomanana
Vaky ny Fitsarana : Very ny « grand dossier » an-dRavalomanana
13/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Misy olona miketrika zava-doza mihitsy eto amin’ny firenena raha ny zava-nitranga tato anatin’ny 72 ora. Nanomboka tamin’ilay kidnapping tsy nahomby teny Ambatobe ny zoma 10 Novambra lasa teo izany, ary nitohy teny amin’ny lapan’ny Fitsarana ny sabotsy 12 Novambra.
Nisy namaky ny lapan’ny Fitsarana etsy Anosy ny sabotsy lasa teo, koa nanjavona vokatr’izany ny « grand dossier » iray mahakasika an’i Marc Ravalomanana. Mpisolovava iray miampy zanaka mpanao politika iray no fantatra fa voasambotra, ary notànana ao amin’ny « brigade criminelle » Anosy. Mbola manohy ny fanadihadiana moa ny mpitandro filaminana hatramin’izao ora hanoratanay izao, fa ny zavatra azo ambara aloha araka araka ny fanampim-baovao azo hatrany dia ny fisian’ny firaisana tsikombakomba tamina mpiraki-draharaha.
Ady heloka be vava
Araka ny efa voalaza tetsy ambony dia « grand dossier » iray mahakasika an’i Marc Ravalomanana no very nandritra izao famakiana ny Fitsarana Anosy izao, ary ady heloka be vava mahakasika vonoan’olona. Ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana araka izany no hamaritra ny fisian’ny fifandraisana eo aminy (Marc Ravalomanana), ary ireo olona roa notanan’ny « brigade criminelle » etsy Anosy ireto. Miandry ny valandresaka hataon’ny manam-pahefana moa ny mpanara-baovao. Hitohy…
solteiras e divorciadas dans Fanisam – bahoaka-HATOMBOKA ETO ANALAMANGA SY ANDROY
Tsy fandriam-pahalemana : Resy ny governemanta Ntsay
Miraviravy tanana tsy mahita izay horaisina ny governemanta Ntsay, manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana, saika manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Isan’andro mantsy dia misy hatrany, na fanafihana mitam-piadiana, na vonoan’olona tsotra izao noho ...Tohiny
Hevitr’ireo olom-pirenena : Mbola tokony hanohy ny asany ny Filoham-pirenena
Fankalazana ny 3 mey : Nomarihina tany Toamasina ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety
Mbola Rajaonah : Lasibatry ny antsojay amin’ny endriny maro
solteiras e divorciadas: Thanks for all of your work on this blog. My daughter delights in engaging in internet research and it is…